Hadda: Muqtaar Rooboow oo laga soo dajiyay Magaaladda Muqdisho. – Hornafrik Media Network
Diyaarad Nooca Qumaatiga u kaca ee Helicopter-ka loo yaqaan oo sidda Muqtaar Rooboow Cali Abuumansuur oo ka mid ahaa Hogaamiyayaashii Alshabaab ayaa goor dhawayd soo caga dhigatay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaaladda Muqdisho.
Diyaaradda ayaa waxa la saaran Wadaadka ka soo goostay Alshabaab Masuuiyiin uu ka mid yahay Wasiirka Gaashaandhiga Somalia, C/rashiid C/laahi Maxamad, Taliye Ku Xigeenka NISA, Jaamac, Saraakiil iyo Ciidamo ka tirsan Dawladda Somalia.
Sheekh Mukhtaar Roobow ayaa saaka isku dhiibay dowladda Soomaaliya, kaddib muddo sanado ah oo uu ku sugnaa deegaanka Abal ee ka tirsan degmada Xudur.
Maleeshiyo taabacsan Sheekh Roobow ayaa maalmihii la soo dhaafay kula dagaalamay deegaanka Abal iyo nawaaxigiisa dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday.
Cutubyo ka tirsan Ciidamadda Gaashaan, Saraakiil Soomaali iyo Ajanabi ah, iyo Masuuliyiin kale ayaa ku sii sugayay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde oo ammaankiisa si wayn loo adkeeyay, Waxaana loo soo galbiyay Rooboow Xarunta Nabadsugidda ee Degmadda Shibis, halkaas oo ah bartii la geeyay Xasan Daahir Aways markii uu Dawladda Somalia u soo gacan galay.
Muqtaar Rooboow Abuumansuur oo ka soo qabtay Kooxda Alshabaab xilal uu ka mid yahay Afhayeenkii Kooxda, Hogaamiye Ku Xigeen iyo Taliye Ciidan ayaa la filayaa inuu Maalmaha soo socda la hadlo Warbaahinta, isagoo cadayn doona Mawqifkiisa ku aadan Alshabaab, Waxaana ka mid ahaa Heshiiskii lala galay markii laga saarayay Liiska Argagixisadda inaan loola macaamilin sida Horjooge isi soo dhiibay ee loola dhaqmo sida Hogaamiye ku sii biiray Dawladda, kadib wadahadal dhex maray Isaga iyo Dawladda Somalia.
Mukhtaar Roobow ayaa gooni u goosad ka ahaa Al-Shabaab, tan iyo sanadkii 2013, markii ay is qabteen Horjoogayaal uu ka mid yahay Horjoogihii ugu sareeyay Kooxda Axmad Godane, Waxaana Khilaafkaasi uu sababay in Godane uu dilo qaar ka mida Horjoogayaashii ka hor yimid oo isugu jiray Soomaali iyo Ajanabi, halka qaar kale oo ay ka mid ahaayeen Abuumansuur, Xasan Daahir Aways, iyo Zakariye ay isaga baxsadeen Kooxda.
Horjoogayaashii Khilaafkaasi loo dilay waxaa ka mid ahaa Ku Xigeenkii Kooxda, Ibraahim Afghan iyo Horjoogayal kale.
Abuumansuur markii uu ka baxsaday Kooxda waxa uu dagay Deegaanka Abal oo ah halkii uu ku dhashay, Waxaana uu Deegaankasi ku sugnaa tan iyo 2013-kii, iyadoo ugu dambayna ay Shabaab ku qasbeen inuu halkaasi isaga cararo, kadib weeraro is daba joog ah oo ay ku soo qaadeen tan iyo Arbacadii, iyagoo doonayay inay dilaan ama Nolol ku soo qabtaan, kadib markii uu iska diiday inuu isku dhiibo.
Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ayaa ka mid ahaa hoggaamiyeyaasha ugu caansanaa Al-Shabaab 10-kii sano ee u dambeeyay ee Kooxda isku fidineysay gobolada koofurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaa uu soo noqday Afhayeenka Guud ee Kooxda, iyo Ku Xigeenka Hogaamiyaha Kooxda, Balse waxa uu noqday mid dibad joog ka ah Go’aanadda Kooxda tan iyo 2013-kii.
Garoonka Muqdisho ee Aadan Cadde oo laga soo dajiyay Abuumansuur waxaa ugu dambaysay Sannadkii 2006-dii, markaas oo ay ka talinayeen Muqdisho Maxkamadihii Islaamiga ahaa oo uu ka ahaa Ku Xigeenka Xoghayaha Gaashaandhiga, isagoo ku xigay Yuusuf Maxamad Siyaad Indhacade oo hadda ah Janan ka tirsan Ciidanka Xoogga.
Abuumansuur waa Hogaamiyihii ugu sareeyay ee Alshabaab ka tirsan oo isku soo dhiiba Dawladda Somalia, Waxayna is dhiibistiisa dhiiragalinaysaa in Hogaamiyayaal kale oo Alshabaab ah ay sidan oo kale isku soo dhiibaan haddii loola macaamilo si wanaagsan Wadaadka Qunyar Socodka ah ee aan xagjirka u ahayn sida Hogaamiyayaasha kale ee Alshabaab.